Wanajinta Agonta, Dumarka Duqayda Kuwa Tabarta yar
WANAAJINTA AGOONTA, DUMARKA, GABDHAHA, DUQEYDA, KUWA TABARTA YAR, FUQARADA IYO MASAAKIINTA IYO IN WANAAG IYO NAXARIIS LOO MUUJIYO, SI TURID IYO NUGEYL LEHNA LOOLA DHAQMO, WAXNA LA SIIYO.
113. “Mu’miniinta garabkaaga (naxariis iyo jaceyl) awgood ugu dibci'. Suuradda Al-Xijri: Aayadda 88.
114. "La sabir kuwa galab iyo subaxba Rabbigood baryaya oo wejigiisa doonaya, indhahaagana iyaga ha dhaafsiin adigoo doonaya quruxda nolosha adduunka". Suuradda Al-Kahaf Aayadda 28.
115. "Agoonka ha u darnaan, waydiistahana ha guul guulin oo hadal san ku dheh". Suuradda Ad-Duxaa: Aayadaha 9-10.
116. "Ma aragtay kan diinta beeninaya? Kaasu waa kan agoonka takhantakheeya, wax siinta miskiinkana aan iska xil saarin (dadkana aan ku boorrin)". Suuradda Al-Maacuun: Aayadaha 1-3.
260. Sacad ibn abii Waqaas (A.K.R.) wuxuu yiri: Lix innaga ah baa la fadhiyey nebiga (S.C.W.) markuu nabigu (S.C.W.) u bandhigay Islaamka gaalada. Gaaladii waxay yiraahdeen: Kuwan naga eri yeysan nagu soo dhiirrane. Lixdu waxay kala ahaayeen aniga, ibn Mascuud, Bilaal, nin reer Hudeyl ah iyo laba nin oo kale aan magacyadooda garaneyn. Markaasay nebiga (S.C.W.) niyaddiisa wax ku soo dheceen, markaasuu laba laabiyey oo meel dhex noqday, goortas buu Alle ku soo dajiyey: "Ha eryin kuwa Rabbigood baryaya galab iyo subaxba oo wejigiisa doonaya". Suuradda al-Ancaam: Aayadda 52.
261. Abuu Hubayrah Caayiz ibn Camar al-Muzani (A.K.R.) oo ka mid ahaa raggii beecada al-Ridwaan (yacni waa nin ka mida raggii raallinimada Alle helay ee dhaarta iyo ballanta ku galay inay naftooda iyo maalkooda u huraan Alle markii Xudaybiyya la joogay). wuxuu yiri: Abuu Sufyaan baa wuxuu ku yimid rag ay ka mid yihiin Bilaal, Salmaan iyo Suhayb; kuwaas oo yiri: Waxaan kaga cad goosannay cadowgii Alle Seefihii Alle, qaarna way sugeysaa, Abuu Bakar (A.K.R.) baa wuxuu ku yiri: Sidaas ma odaygii Quraysheed baad ku leedihiin? Markaa buu intuu (Abuu Bakar) Nebiga (S.C.W.) u tegey buu u sheegay wixii dhacay. Wuxuu yiri nabigu (S.C.W.): Armaad ka caraysiisay (raggaa sharafta badan)? haddii aad ka caraysiisay Rabbigaa baad ka caraysiisay. Abuu Bakar (A.K.R.) intuu ku noqday buu yiri: Walaalayaaloow, Miyaan idiinka caraysiiyey? Waxay ku jawaabeen May. dembigaaga Allaha dhaafo walaalle. (Muslim)
262. Sahal Ibn Sacad (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Aniga iyo kan agoonka daryeela, waxynu gali Jannada innagoo sidaa oo kale ah" wuxuuna kor u qaaday fardhexada iyo murugsatada oo simay oo isu dhaweeyey. (tusaale ahaan). (Bukhaari)
263. Abuu Hurayrah (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "aniga iyo kan daryeela agoonka, xigto ha la ahaado, ama shisheeye ha ka ahaadee waxaynu ahaan doonnaa sida labadaa Jannada dhexdeeda; weriyaha xadiiska nabiga ka soo xigtay (oo ah Maalik bin Anas) wuxuu kor u taagay fardhexaada iyo murugsatada oo simay si uu arrintaasi u muujiyo". (Muslim)
264. Abuu Hurayrah (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Miskiinku ma aha kan ay celinayso oo ku tagaya xabad timir ah ama laba xabbo ama rudmo ama a laba rudmo: miskiinka dhabta ahi waa kan isagoo faqri qaba, ka xishoonaya baryada". (Bukhaari iyo Muslim)
265. Abuu Hurayrah (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Ninkii u dadaala oo u shaqeeya dumarka daÕda ah ee laga dhintay iyo masaakiinta wuxuu heli ajar la mid ah mujaahidka (jidka Alle u diriraya); weriyaha xadiiska wuxuu yiri waxaan u malaynayaa inuu nabigu (S.C.W.) intaa raaciyey: wuxuuna heli ajar la mid ah kan habeenkii oo dhan salaadda u taagan oo aan daalayn iyo kan soomanaha ah ee aan afurin". (Bukhaari iyo Muslim)
266. Abuu Hurayrah (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Cuntada waxaa u xun cuntada martiqaadka ah ee aroosyada ee aan looga yeerin dadkii u baahnaa, laguna casumo dad aan dooneyn inay ka soo qayb galaan; qofkii casumaad loogu yeero oo diidana Alle iyo rasuulkiisuu ku caasiyey". (Muslim).
Werin kale oo ku sugan Bukhaari iyo Muslim waxay leedahay: "Cunto waxaa u xun cuntada martiqaadka aroosyada ee dadka maal qabeenka iyo hodanka ah looga yeero, saboolkana laga tago". (Bukhaari iyo Muslim)
267. Anas (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: ÒQofkii laba gabdhood masaruufa (yacni siiya masruuf, marasho, kuna barbaariya barbaarin diini ah iyo Alle ka cabsi) ilaa ay ka qaan gaaraan, wuxuu maalinta qiyaame imaanayaa isagoo sida labadaas aan isku nahay. Intuu labada farood isku lammaaniyey. (Muslim)
268. Caa'isha (A.K.R.) waxay tiri: Waxaa ii timid naag wadata labo gabdhood oo ay dhashay oo iyaga wax u baryeysa. waxba ma hayn waqtigaa aan siiyo xabbad timir ah maahee oo aan siiyey. Waxay u kala jeexday labadeedii gabdhood, iyadiina wax ma cunin. Dabadeedna waa kacdoo iska tagtay. Waxaa yimid Nebiga (S.C.W.) oo aan u sheegay arrintaa. Wuxuu yiri: Qofkii lagu imtixaano gabdho dhalka oo markaas wanaajiya (yacni siiya masruuf, marasho, kuna barbaariya barbaarin diini ah iyo Alle ka cabsi, sida inay ku dadaalaan towxiidka, salaadda, sakada, xijaabka iyo is asturka, iyo waajibyada kale ee diinigia ah oo dhan, dabadeedna u guuriya nin diin iyo dabci wanaagsan leh). waxay xijaab iyo gaashaan uga noqon doonaan naarta". (Bukhaari iyo Muslim)
269. Caa'isha (A.K.R.) waxay tiri: Naag miskiin ah baa ii timid iyo laba gabdhood oo ay dhashay. Markaasaan saddex xabbo oo timir ah siiyey. Midba midbay siisay tii kalena inay iyadu cunto damacday. Markay afka la aadday bay labadii gabdhood ka baryeen. Say way u kala jeexday oo kala siisay. waa aan la yaabay falkeedaasi, waxaana u sheegay nebiga (S.C.W.) sidii ay yeeshay. Wuxuu yiri nabigu (S.C.W.): Alle wuxuu u waajibiyey janno falkeedaasi awgeed; ama Alle naar buu kaga xoreeyey falkeedaasi. (Muslim)
270. Abuu Shurayx Khuweylid ibn Camar al-Khuzaaci (A.K.R.) wuxuu yiri: Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Alloow, waxaan caddeyn inay dambi tahay (dhibaato weynna ay ka soo gaari) qofkii dayaca xuquuqda labada tabarta yar, agoonta iyo dumarka". (Nisaa'i) Fiiro gaar ah: Imaam NisaaÕi wuxuu sheegay inuu xadiiskan xasan yahay sanad wanaagsan.
271. Muscab ibn Sacad Abii Waqaas (A.K.R.) wuxuu yiri: Sacad baa wuxuu isu arkay inuu ka sito oo ka sarreeyo dadka liita aan sidiisoo kale u ladneyn. Nebigu (S.C.W.) wuxuu yiri: "Waxaa la idiinku hiilliyaa oo la idinku irsaaqaa dadkiinna tabarta yar dartood". (Bukhaari)
272. Abuu Dardaa (A.K.R.) wuxuu yiri: Waxaan maqlay Nabiga (S.C.W.) oo leh: "Farxadda iyo raallinimeyda waxaad ka dhex daydaan (daryeelka) dadka tabarta yar, Waayo waxaa la idiinkaga hiilliyaa (cadowgiinna) oo la idinku siiyaa (risiqiinna) dadkiinna tabarta yar dartood". (Abuu Daawuud)
Imaam Daawuud baa ku wariyey xadiiskan sanad fiican.
Fiiro gaar ah: Nuxurka iyo dhuuxa aayadaha Qur'aanka iyo axaadiista nabiga (S.C.W.) ee kor ku xusan waa soo dhoweynta iyo marti gelinta iyo wax tarka dadka, gaar ahaan masaakiinta iyo dadka tabarta yar iyo ka fogaanshaha kibirka iyo isla weynida. Waayo isla weynidu wa sifo iyo tilmaan ku gaar ah Alle, weynaa oo kor ahaaye, mana jirto cid sifadaa iyo tilmaantaa la wadaagta. Sidaa awgeed kuma habboona addoomada Alle inay isla weyni muujiyaan ama naftooda u arkaan sida wax weyn oo sare. Addoommada Alle waxaa waajib ku ah inay ahaadaan kuwa martida soora oo soo dhoweeya oo isla markaa kibir iyo isla weyni ka maran. Waxaana waajib ku ah inay iskula dhaqmaan si nadiif ah oo ilbaxnimo ku jidho iyo naxariis. Intaa waxaa dheer, naxariista iyo jaceylka waa tilmaamo iyo arrimo aan ku koobneyn dadka oo keliya, bal xitaa waxaa la wadaaga nafley kale. Tilmaamahaana waxay ka cayaaraan dowr weyn hannaanka iyo hab socodka kownka. Sida uu dhigayo Qur'aanka kariimka ah, magacaabidda nabi Muxammad (S.C.W.) loo magaacaabay xilka Ah "Rasuulkii Alle" waxaa sabab u ahaa naxariista badan iyo gallada Alle.